‘जर्सी’को रिमेकमा साहिद, वुझे ३५ करोड पारिश्रमिक – Khabar Silo
तेलुगु चलचित्र ‘अर्जुन रेड्डी’को हिन्दी रिमेक ‘कविर सिंह’ बक्स अफिसमा बम्पर हिट भयो । यसै चलचित्रबाट सुस्ताइसकेको बलिउड नायक साहिद कपुरको करिअर जुरुक्कै उचालियो । चलचित्रमा साहिदको कामको प्रशंसा पनि खुबै भयो ।
चलचित्र सफल भएको फाइदा उठाउँदै साहिदले पनि आफ्नो पारिश्रमिक बढाए । अहिले साहिदले एक नयाँ चलचित्रको लागि ३५ करोड पारिश्रमिक बुझेका छन् । उनले तेलुगु चलचित्र ‘जर्सी’को रिमेकमा काम गर्न ३५ करोड बुझेको भारतीय मिडियाले दाबी गरेका छन् । उनले, चलचित्रको नाफा रकमबाट ३० प्रतिशत समेत लिनेछन् ।
क्रिकेट खेलसँग सम्बन्धित यो चलचित्रमा साहिद क्रिकेट खेलाडी बन्नेछन् । एक क्रिकेट खेलाडीको संघर्ष र सफलताको कथालाई चलचित्रले प्रस्तुत गर्नेछ । चलचित्रलाई लिएर साहिद निकै उत्साहित छन् ।
तेलुगु चलचित्र ‘जर्सी’मा नानी र श्रद्धा श्रीनाथको मुख्य भूमिका थियो । रिमेक चलचित्रमा भने नायिका फाइनल गरिएको छ । रिमेक चलचित्रलाई तेलुगु चलचित्र निर्देशन गरेका गौतम तिन्नानुरीले नै निर्देशन गर्नेछन् ।
अक्षय कुमारको यो फिल्ममा भित्रिए ज्याकी श्राफ
मुम्बई – बलिउड अभिनेता ज्याकी श्राफ रोहित सेट्टीको फिल्म ‘सूर्यवंशी’ मा भित्रिएका छन् । अक्षय कुमार स्टारर यो प्रतीक्षित फिल्ममा ज्याकीको एक महत्त्वपूर्ण भूमिकाका लागि इन्ट्री भएको हो । ज्याकीले यो फिल्ममा काम गर्न पाउँदा आफूलाई रमाइलो लागेको बताए । उनले आफ्नो भूमिका चाखलाग्दो भएको पनि बताए । यो फिल्ममा अक्षय कुमारका साथ क्याटरीना कैफलाई […]
वंगत अभिनेता सुशान्तसिंह राजपुतको निधनपछि उत्पन्न ड्र ग्स प्रयोग प्रकरणमा मुछिएका अभिनेत्रीहरुसँग ‘नार्कोटिस कन्ट्रोल ब्यूरो’ (एनसिबी) ले बयान सकाएको छ । पछिल्लो दुई हप्तायता लगातार मेडलाइन बनिरहेको यो प्रकरणमा मुछिएका अभिनेत्रीहरुले अब भने राहतको स्वास फेर्ने वातावरण बनेको बलिउड मिडियाले लेखेका छन् । एनसिबीसँगको सोधपुछमा संलग्नता देखिएका दीपिका पादुकोण, श्रद्धा कपुर, सारा अलि खान, राकुलप्रित […]
सरस्वती पुजाको दिन फिल्म हेर्ने सोंच बनाउनु भएको छ ? सिनेफ्लेक्सले दिने भयो टिकेटमा भारी छुट !
ईटहरी, १५ माघ । सरस्वती पूजाको दिन हरेक चलचित्रको टिकेट खरिदमा २५ प्रतिशत छुट हुने भएको छ । सुनसरीको ईटहरीस्थित सेन्ट्रल प्लाजामा रहेको सिने फ्लेक्समा यस्तो छुट हुने भएको हो । सो हलमा चलिररहेका जुनुसुकै चलचित्रको टिकट खरिदमा सो छुटको ब्यबस्था गरिएको जनाईएको छ । सेन्टर प्लाजाको आकर्षणकाे रूपमा सिने फ्लेक्स रहेकाे छ । सुविधा […]